Aqoonyahan Cabdiwahaab sheekh oo daljir uga waramay isbadalka Siyaasadda Geeska (dhegayso) – Radio Daljir
Nofeembar 10, 2018 9:43 g 0
Dalka Itoobiya gaar ahaan magaaladda bahar daar, waxaa ku soo dhamaady kulan saddex hogaamiye u dhexeeyey Hogaamiyaas oo kala ahaa Maxamed Cabdulaahi faraajo Madaxweynaha Soomaliya, Raiisal wasaaraha Ethopia Abey Axmed iyo Madaxweynaha wadanka Eratria.
Madaxdan ayaana ka wada hadlay arrima ay ka mid yihiin isdhexgalka bulshadda ee wadamadda bariga africa siiba saddexda wadan ee ay madaxdda ka yihiiin ,waxaana jiray kulamo ka horeeyey kan oo heshiiyo is afarad lagu gaaray sida magaalada Asmara oo kale.
Hadaba dadka soomaliyeed amaba Geeska africa sidee uga dhaqan gali kartaa is dhexgal bulsho iyadoo la ogyahay wadamada qaar siiba kuwan maanta madaxdoodu kulantay waxa dhex maray marka la Eego .
Qaar ka mid ah dadka soomaliyeed ayaa sooo dhaweeyey arrintan kuna tilmamay mid xilligeedi la qaaday, balse dadka qaar ayaa arintaas mid ka duwan qabo oo waxay tahay si gaar ah soomaaliya waxba lama qabsan karto dariskeed iyo kuwa kale toona iyadoo gudihii wadanka aysan hagaagsaneyn xag amana jidad dekado iyo Airabooro .
Hadab dadka in lgu deg degay arimaaas Aaminsan waxaa kamid ah Prof Cabdiwahaab Sheikh Cabdisamad oo ka faalooda Arrimaha geeska AFrica ahna barre jaamaceed muddo dheerna ahaa kabiir dhanka taariikhda arrimaha Geeska.